कसरी कपाल देखि काली बन्द गर्न को लागी?
कसरी कपाल देखि कालो बन्द धुनु?
हरेक महिलाले आफ्नो उपस्थिति समय-समयमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ। र कपाल रङ एक छवि ब्रश गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका हो। तर के असफल "प्रयोगहरू" को बारेमा? कपालबाट कालो रंगलाई कसरी धोका गर्ने प्रश्नको प्रश्न उचित निष्पक्षको धेरै प्रतिनिधिहरूको लागि चासो हो। सौभाग्य देखि, त्यहाँ विधिहरू छन्।
पेशेवर उपकरणको सहायताबाट कपालबाट कालो रंग कसरी धोएर?
कालो हरेक महिलाले फिट गर्दैन। र के भयो यदि बाल कलरले इच्छित नतिजा ल्याएन? उत्तम र सबै भन्दा प्रभावकारी तरिका ब्यूटी सैलूनमा लागू हुन्छ। यहाँ, विशेषज्ञहरूले बालको टाउकोको अवस्था निर्धारण गर्नेछन् र सबैभन्दा इष्टतम विकल्प छान्नेछ। अक्सर यस उद्देश्यको लागि, कपाल रंगको धुरी प्रयोग गरिन्छ। यो एक रासायनिक सक्रिय एजेन्ट हो जुन बालको ढाँचामा कार्य गर्दछ, बिस्तारै काली रंग हटाउँदै। यो सेवा लगभग हरेक बाल सैलून द्वारा प्रदान गरिएको छ। तर, दुर्भाग्यवश, प्रक्रिया सस्तो छैन।
निस्सन्देह, तपाईं यो धो स्टोरमा किन्न सक्नुहुन्छ। तर यो बुझ्न सार्थक छ कि यस्तो उपचारले एकै ठाउँमा वा अर्कोमा कपाललाई क्षति पार्छ। अनि निस्क्रिय प्रयोगले तपाईंको कपालको अवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। यदि तपाईंलाई रासायनिक समाधि प्रयोग गर्न अनुभव छैन भने, यो एक विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न वा स्पष्टीकरण को सुरक्षित तरिकाहरू मनपर्छ।
कसरी घरबाट कपालबाट कालो बन्द गर्न घर छोड्नु हुन्छ?
कालो पाराबाट छुटेको सबैभन्दा प्रभावकारी र सुरक्षित तरिकाहरू साधारण घरको साबुन हो। धेरै स्टाइलिस्ट र ह्याण्डरहरूले यो विधि शुरुवात गर्न सिफारिस गर्छन्। तपाईलाई आवश्यक छ कुनै पनि additives, स्वाद, आदि को बिना एक कपडे साबुन।
पहिले आफ्नो कपाल कुल्ला र तिनीहरूलाई प्रशस्त साबुन साबुन गर्नुहोस्। दस मिनेटको लागि कर्ल छोड्नुहोस्, र अब तिनीहरूलाई राम्ररी कुल्ला गर्नुहोस्। निस्सन्देह, एक प्रक्रियाको लागि तपाईं अघिल्लो रङ फर्कन सक्नुहुन्न। तर घरपरिवार साबुनको नियमित प्रयोगले बिस्तारै काली डाई धोएको छ। तर साबुन साबुन ड्रेसलाई सम्झनुहोस्। यसैले प्रत्येक यस्तो प्रक्रिया पछि, एक पोषणशील मुखौटा लागू गर्नुहोस् - त्यसैले तपाईं सुत्ने, कमजोरी र चिसोबाट टाढाबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
अर्को प्रभावकारी उपकरण सोडा पाकिरहेका छन्। पहिले, तपाईंको शैम्पू को एक नै खुराक संग यस पदार्थ को आवश्यक रकम को मिश्रण (यो घनत्व र कपाल को लंबाई मा निर्भर गर्दछ)। मिश्रण ध्यानपूर्वक मिश्रण गर्नुहोस् ताकि कपाल टाँस्ने एक समान तहसँग ढाकिएको छ। दस मिनेटको लागि सोडा छोड्नुहोस्, र त्यसपछि ध्यानपूर्वक पानीसँग पानी कुल्ला गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि सोडा भनेको घर्षण हो, त्यसैले यसले सुनको टाउकोको ढाँचालाई क्षति पार्न सक्छ। त्यसकारण, प्रक्रिया पछि, तपाईंले एयर कंडीशनर प्रयोग गर्नुपर्दछ।
यदि यी विधिहरूले तपाईँलाई सम्बोधन गर्दैन भने, र तपाईं अझै पनि आफ्नो कपालबाट कालो पेंट धोईदिने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ एक विशेष उपाय तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न को लागि, एक शैम्पू उच्च पीएच संग। त्यसपछि यस उपचारको चिसो लगभग एक चौथाई 10 कुचल अक्रोबिक एसिड ट्याब्लेटहरू (औषधिमा बेचेको) सँग मिल्दछ। नतिजाको रूपमा, तपाईले मोटो प्याच पाउनु पर्छ, जुन कपालमा लागू गर्नुपर्छ र 25 मिनेटको लागि बायाँ राख्नु पर्दछ। अब ध्यानपूर्वक कुल्ला गर्नुहोस्। यदि पहिलो पटक पछि पङ्क्ति पूर्ण रूपमा हटाउन सकिँदैन भने, तपाइँले यो प्रक्रिया धेरै पटक दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
घरको कपाललाई कसरी हल्का पार्नु हुन्छ?
चित्रकार गर्नु अघि तपाईंसँग हल्का कपालहरू छन् भने, तपाईं तिनीहरूलाई सुखद स्वर्ण छाया फर्काउने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। मधुको मास्क धेरै प्रभावकारी छ , तयार गर्न सजिलो छ। पहिलो सोडा प्रयोग त्यसपछि गीला कपालमा, आवश्यक मात्रामा प्राकृतिक शहलाई लागू गर्नुहोस्, समान रूपमा सम्पूर्ण लम्बाईमा फैलिएको। अर्को, तपाईं प्लास्टिकको टोपी राख्नु वा बाल चलचित्रको साथ कपालको आवरण गर्न आवश्यक छ, र माथि तौलिया लपेटो। रात मा गर्न को लागि मास्क वांछनीय छ, किनकि यो दस घण्टाको लागि राख्नु पर्छ। बिहानै, महाराजका बासिन्दाहरूलाई कुल्ला र कपालको प्रतिभा को मजा लिनुहोस्।
हल्का कपालहरूमा अर्को राम्रो ज्ञात सहायक, निस्सन्देह, चिमनी, जुन महिलाहरू पुरातन समयमा प्रयोग गरिन्छ। बिरुवाको दुइवटा चम्मचका फूलहरू उज्यालो पानीको गिलास र दस मिनेटसम्म उकालो लाग्छन्। यसपछि, एक बेसिनमा भित्तालाई पखाल्नुहोस् अनि न्यानो पानीको आवश्यक मात्राको साथ। पानीमा कपाल हटाउनुहोस् र 10 देखि 15 मिनेट सम्म पकड्नुहोस्। सात लगातार दिनको लागि प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
फैशनेबल देखिन्छ: एक कपाल संग "झगडा" कपाल
अनुहारको कपाल हटाउने
सीधा व्हिस्की, ओब्जेक्ट व्हिस्की - फैशन प्रवृत्तिका, बाल कपाल टेक्नोलोजी
शैम्पू "एस्टेल"। अनुप्रयोग र परिणाम
राम्रो फ्रिज किन्न के छान्ने?
चयनकर्ता - यो के हो? सुविधाहरू pikernoy गियर
Hatice सुल्तान: एक जीवनी। मृत्यु Hatice सुल्तान। बच्चाहरु Hatice सुल्तान
प्राचीन दर्शन: Democritus। Democritus को Atomism र आफ्नो आधारभूत स्थिति छोटकरीमा। Democritus र atomism दर्शन छोटकरीमा
राज्य समर्थन संग बंधक। "कृषि बैंक": बंधक सर्तहरू, समीक्षा
Gerunds को Morphological विश्लेषण
किन मान्छे को रुचाउनु भएकाहरूलाई परिवर्तन गर्छन गर्छन्?
गैर-धातु को शारीरिक गुण। आवधिक प्रणाली मा स्थिति को विशेषताहरु
Alchemical सामाग्री - चन्द्र चीनी
सौन्दर्य, pronesonnaya उमेर माध्यम: ज्यामितीय पैटर्न, काठ नक्काशी
Bebeton: बच्चा को आराम र सुरक्षा को लागि सीट